Safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay halkii ay ku socotay Lacagtii lagu qabtay Garoonka Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay halkii ay ku socotay Lacagtii...
Safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay halkii ay ku socotay Lacagtii lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Muqdisho (Caasimadda Online) _ Safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa ka hadlay lacagta lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho ee la sheegay inay u socotay safaaradda Imaaraadka.
Safiirka Imaaraadka Maxamed Ahmed Osman Alhammadi ayaa sheegay in lacagta la qabtay aanay u socon safaaradda Imaaraadka, balse ay ahayd lacag ku socotay Wasaaradda Gaashaandhigga, ayna ahayd mushaarka ciidamada Soomaalida.
Safiirka ayaa u sheegay VOA-da in dowladda Soomaaliya ay ogeyd, laguna wargeliyay imaanshaha lacagtaasi u socota ciidamada, iyadoo Imaaraadku ciidamo ku tababarro magaalada Muqdisho iyo boqolaal askari oo uu ku tababarro Puntland.
Saraakiil ka tirsan ciidamada NISA ayaa su’aal ka keenay tirada lacagta iyadoo ku doodaya in mushaarka ciidamada aanu ka badneyn 1 Milyan oo doolar, balse lacagta ku dhow 10-la Milyan ay shaki abuurtay.
Waxaa la sheegay in Safiirka Imaaraadka uu ku sugnaa Garoonka Muqdsho, isagoo damcay inuu lacagtaasi kasoo qaado Garoonka, balse ay ka hor istaageen ciidamada Sirdoonka oo la wareegay, iyadoo baaritaan lagu hayo iminka, lana geeyay xarunta Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Halkaan hoose ka akhriso warbixinta ay VOA ka qortay arrintaan: